Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း)
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Meladinine® ကို ထိန်းချုပ်ထားသော ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်နှင့်အတူ ပြင်းထန်သော အရေပြားလေးဖက်နာ ကုသရာတွင် သုံးပါသည်။ အခြား အရေပြားရောဂါများ အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ( စိမ်ရေကွက်၊ cutaneous T-cell lymphoma- CTCL)
Meladinine® သည် အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် နှင့် ပိုပြီး ထိတွေ့စေသည်။ အရေပြားလေးဖက်နာ ကုသရာ တွင် ထိုပေါင်းစပ်မှုသည် အရေပြားဆဲလ်များ အလွန်ကြီးထွား မှုကို နှေးစေသည်။ စိမ်ရေကွက် ကုသရာတွင် ထိုပေါင်းစပ်မှု သည် အရေပြားရှိ ရောင်ခြယ်ထုတ်ဆဲလ်များ အရေအတွက် ကို များစေသည်။
Meladinine® ကို အခြား အသုံးပြုမှုများလည်း ရှိသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပါ။
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Methoxsalen မသောက်မီနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကုသမှု မခံယူမီ ၂၄ နာရီအတွင်း နေပူစာ မလှုံပါနှင့်။
ဆေးပြားကို ကြိတ်ချေခြင်း၊ ချိုးခြင်း၊ ဝါးစားခြင်း မပြု ပါနှင့်။ Meladinine® တစ်လုံးလုံးကို ရေဖြင့် မျိုချပါ။
ဤဆေးကို အစာ သို့မဟုတ် နို့ နှင့် အတူ ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကုသမှု မတိုင်ခင် ၂-၄ နာရီ သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသလို သောက်ပါ။
Meladinine® ကို အစာနှင့် သောက်ခြင်းသည် ဆေး စုပ်ယူမှုကို ကောင်းစေပြီး ပျို့တက်ခြင်းကို လည်း နည်းစေသည်။
ဤဆေးကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကုသမှု မခံယူမီ ရောဂါဖြစ်သော အရေပြား နေရာကို ကျန်းမာရေး ပညာရှင်မှ လိမ်းပေးသည်။
Meladinine® ဘယ်လိုသုံးရသည်ကို ကျန်းမာရေး ပညာရှင်အား မေးမြန်းပါ။
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Meladinine® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Meladinine® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Meladinine® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Meladinine® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ခြင်းနိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Meladinine® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Meladinine® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Meladinine® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင် ပါ။ Meladinine® သည် US အစားအစာ နှင့် ဆေးဝါး စီမံခန့်ခွဲရေး (FDA) အရကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အန္တရာယ်တွင် အဆင့် C ဖြစ်သည်။
နို့ရည်တွင် စွန့်ထုတ်သလား မသိရှိပါ။ သတိပြုပါ။ ကိုယ် ဝန်ဆောင်စဉ်၊ နို့တိုက်ကျွေးစဉ် ဤဆေးကို မသုံးမီ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်နှင့် အမြဲ တိုင်ပင်ပါ။
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အရေပြား ယားယံခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ မည်းနက်ခြင်း
ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ အဖုအပိမ့်များထွက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ( အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည် ချောင်း) တို့ပါဝင်သည်။
ဤ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်စွာ အရေပြား နီရဲခြင်း
အရေပြား ဖောင်းကြွခြင်း၊ အရေပြားကွာခြင်း၊ မီးလောင်ဖုများ ဖြစ်ခြင်း
အရေပြား ပါးခြင်း၊ တွန့်ခြင်း
လက်သည်း ခြေသည်းများ ညိုခြင်း၊ ဖြူခြင်း၊ ဝါခြင်း
စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း ( စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန် ခြင်း)
ပုံမှန်မဟုတ်သော မှဲ့၊ အရေပြားအနာ
ဘယ်ဆေးတွေက Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meladinine® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
အောက်ပါ ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။
Meladinine® သုံးခြင်းသည် CYP2A6 isoenzyme မှ ဓါတ်ပြောင်းလဲပေးသော ဆေးများ၏ သွေးရည် ကြည်တွင်းရှိ ပြင်းအားကို များစေသည်။
အလင်းကို တုံ့ပြန်သော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစည်း သက်ရောက်ခြင်း (ဥပမာ- anthralin, ကတ္တရာစေး၊ nalidixic acid)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Meladinine® အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ရှိမရှိကို ဆရာဝန်၊ ဆေးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meladinine® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့်
အောက်ခြေဆဲလ် ကင်ဆာအကျိတ် မှတ်တမ်းရှိခြင်း
အရင်က arsenic therapy ခံယူဖူးခြင်း
Granz ray ကုထုံး
နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ကြာရှည်စွာရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူ ဒဏ်ကို မခံနိုင်သော သူများ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ နာတာရှည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှု
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စိမ်ရေကွက်ဖြစ်သော နေရာများ အရောင်ပြန်ပြည့်ခြင်း
သောက်ဆေး။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှု မတိုင်မီ ၂-၄ နာရီတွင် ၂၀ မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် ၆၀၀ မိုက်ကရို ဂရမ်/ကီလိုဂရမ်။ အပတ်စဉ် နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ ခြား၍ တစ်ရက်ခြား သောက်ပါ။
လိမ်းဆေး။ As 1% solution ( diluted to 0.1-0.01% ) : ဒဏ်ရာပေါ်လိမ်းပြီး ခရမ်းလွန်ရောင် ခြည်နှင့် ချက်ချင်းထိတွေ့ပါ။ သို့မဟုတ် ၂နာရီ လောက်စောင့်ပါ။ ဒဏ်ရာဝန်းကျင် နေရာကို နေလောင်ခံ ကရမ် လိမ်းပါ။ ကုသမှုပြီးနောက် ဒဏ်ရာကို ဆေးကြောပြီး အလင်းရောင် မထိပါစေ နှင့်။ ၄၈ နာရီနှင့် အထက်ထိ မထိအောင်ထားပါ။ ကုသမှုကို အပတ်စဉ် တစ်ခါထပ်လုပ်ပါ။ အပြည့် အရောင်ပြန်ပြည့်ရန် ကုသမှု ၆-၉ လ လိုအပ်သည်။
သောက်ဆေး။ ၆၀၀ မိုက်ကရိုဂရမ်/ ကီလိုဂရမ် နီးပါး။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် မထိတွေ့မီ ၁.၅-၃ နာရီ တွင် သောက်ပါ။ ကုသမှုကို အပတ်စဉ် နှစ်ကြိမ် လုပ်သင့်ပြီး လိုအပ်သလို ပိုလုပ်သင့်သည်။ ပထမ ဆေးသောက်ချိန် နှင့် ဒုတိယ ဆေးသောက်ချိန်ကို အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီခြားပါ။ PUVA ကုသမှု ၁၅ကြိမ် လုပ်ပြီးနောက် တုံ့ပြန်မှု မရှိပါက သို့မဟုတ် နည်း ပါက ဆေးပမာဏကို ၁၀ မီလီဂရမ် တိုးနိုင်သည်။ ထို ပမာဏကို လက်ကျန် ကုသမှုတစ်လျှောက် သုံးပါ။
လိမ်းဆေး။ Asa0.15% solution (diluted to 0.015%, if necessary); ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် မထိတွေ့မီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဒဏ်ရာပေါ်ကို လိမ်းပါ။ လူနာသည် Meladinine® ပျော်ရည်တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ရေချိုးနိုင်သည်။ ထို့နောက် ချက်ချင်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့ပါ။ လက်နှင့် ခြေထောက်ရှိ အနာနေရာများကို ၃ မီလီဂရမ်/ လီတာ ပျော်ရည်တွင် ၁၅မိနစ်လောက် စိမ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် မထိတွေ့မီ မိနစ် ၃၀ စောင့်ပါ။ ရေချိုးခြင်း စိမ်ခြင်းကို အပတ်စဉ် နှစ်ကြိမ် လုပ်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Meladinine (မဲလ်လဒီနင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Meladinine® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင် သည်။
Meladinine® ဆေးပြား။ ၁၀ မီလီဂရမ် Methoxsalene
Meladinine® လိမ်းဆေး ပျော်ရည်။ ဝ,၁% Methoxsalene
Meladinine® လိမ်းဆေး ပျော်ရည်။ ဝ,၇၅% Methoxsalene
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်သောက်နေသော ဆေးများ (ညွှန်ကြားထားသောဆေးများ၊ အလွယ်တကူ ဝယ်၍ရသော ဆေးများ) အားလုံး၏ စာရင်းကို ယူလာရန် အရေးကြီးသည်။
Meladinine® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
အရေပြားလေးဖက်နာ က ကိုယ်ဝန်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မလဲ